Arsenal oo ku fikireysa soo xero galinta ciyaaryahan hore ee kooxda Chelsea ah – Gool FM
(London) 29 Juunyo 2019. Arsenal uu hogaaminayo tababare Unai Emery ayaan wali wax heshiis ah ka sameynin suuqan xagaaga, xili taageerayaasha Gunners ay wali sugayaan heshiisyada rasmiga ah ay kooxda sameyn doonto.
Si kastaba ha ahaatee, qof kasta ee Arsenal ah ayaa waxay rajeeneysaa in heshiisyada loogu talagalay kooxda si dhaqso ah loo xaliyo, gaar ahaan qeybta daafaca.
Hadaba laacibkii hore ee kooxda Chelsea, kaasoo uu soo idlaaday heshiiskiisa Blues xagaagan ee Gary Cahill ayaa ah laacib si xur ah loo heli karo adeegiisa suuqan xagaaga, waxaana indhaha ku haya kooxo badan ee ka dhisan England, sida ay qortay “Mirror”, Arsenal ayaana qeyb ka ah kooxahan.
Waxa laga yaabaa in Gary Cahill uu ku dhiirado u dhaqaaqista Arsenal, maadaama ay Gunners ka mid tahay 6-da kooxood waa weyn ee horyaalka Premier League, iyo inuusan dooneynin inuu ka tago magaalada London, maadaama uu in mudo ah uu ku soo qaatay Chelsea.
Yeelkadeeda, Unai Emery ayaa wuxuu doonayaa inuu kooxda Gunners ka fasaxo Shkodran Mustafi suuqan xagaaga, kaddib markii uu soo bandhigay qaab ciyaareed xun, xili ciyaareedkii dhawaan laga soo gudbay.